गुन्डाको गङ्नम स्टाइल
'म के को गुन्डा, मैले कहिले गुन्डागर्दी गरेँ?' आँखाको भावले जनाउँथ्यो उनको पारो तात्यो, 'चक्रपथमा सबलाई सोधे हुन्छ, म समाजसेवी हुँ। अनि एमालेको खाँटी कार्यकर्ता। हावातालमा गुन्डा भन्ने?'
रोटी बेटी र अपहरणको सम्वन्ध
बोस्टनका बन्धन दिन
बोस्टन (अमेरिका)-अमेरिकाको ऐतिहासिक सहर बोस्टनमा हरेक वर्ष हुने विश्वकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित म्याराथन हुँदै थियो। सेन्ट प्याट्रिक डे (गत सोमबार) का दिन हुने दौडमा विश्वभरका खेलाडी र दर्शक ओइरिएका थिए। म्याराथनको ११७औं संस्करण अचानक विस्फोटको धुवाँले घेरिएको दुर्दान्त स्मृतिमा परिणत भयो। आतंकवादी विस्फोटमा तीनजनाको मृत्यु भयो, १ सय ८६ भन्दा बढी घाइते भए। प्रतियोगितास्थलमा १५ सेकेन्ड अन्तरमा दुइटा बम आक्रमण हुँदा देश-विदेशका सहभागी आतंकित र भारी मन लिएर फर्के। दौड पूरा गर्नेलाई दिन ल्याइएका पुष्पगुच्छा लासमाथि फालिए।
शुक्रबार २७ पुष, २०६९
बिहीबार २६ पुष, २०६९